Sidee si ay u gudbiyaan fiidiyo Video inay DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Video > Sidee si ay u gudbiyaan fiidiyo Video inay DVD
Digital fiidiyo waa mid ka mid ah waxyaabaha guriga ugu caansan ee waqtiga oo dhan. Kaamirada ayaa laga sameeyey videos toogashada hawl fudud, degdeg ah oo xiiso leh. Waxaa laga yaabaa in aad hesho qaar ka mid ah muuqaalka fiidiyo weyn ee aad caruurta, eeyaha iyo Harley Davidson. Oo haatan rabto in aad hesho footage this on in aad PC ama xataa badalo fiidiyo video inay DVD si aad daawan kartaa faylasha ciyaaryahanka DVD ama TV.
Halkan waxaan ku talinaynaa fiidiyo ah in DVD gubi - Wondershare DVD Creator (Windows 8 taageeray) si aad tixraac. Sidaa daraadeed, waxaad ka heli doontaa waxa quruxsan fudud si ay u gudbiyaan videos fiidiyo ugu DVD si aad ku raaxaysan kartaa waqti tayo leh daawashada filimaanta qoyskaaga guriga.
Free download fiidiyo ugu DVD gubi:
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonayso in la abuuro DVD ka videos fiidiyo ee Mac socda Mac OS X Snow Leopard, Libaaxa, Mountain Libaaxa, iwm, u leexdo xagga Wondershare DVD Creator for Mac . Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka ay gubaan fiidiyo video inay DVD on PC. Habka ay gubaan fiidiyo video inay DVD ah ee Mac waa isku mid.
Sida loo badalo fiidiyo video inay DVD talaabo talaabo ah
Tallaabada 1. Load videos fiidiyo
Marka videos fiidiyo wareejiyo computer, ordo barnaamijka oo guji "Import" in lagu daro videos fiidiyo aad rabto in aad ku gubi in DVD disc ah. Ka dib markii loading oo dhan faylasha, waxaad ku eegaan karo videos ee suuqa kala xaq u arkaysid ka.
Tallaabada 2. Dooro DVD menu ah
40 Foomamka menu DVD free dhisay-in la siiyaa. Waxaad dooran kartaa DVD menu iyo Customize ka thumbnails DVD menu, sawirada asalka, badhamada, iwm sida aad jeceshahay. Isticmaal aad jeceshahay music iyo sawirka sida music ka soo jeeda iyo image of menu DVD ah si ay u shakhsiga iyo macno leh.
Haddii loo baahdo, waxa kale oo aad isticmaali kartaa in ay shaqo tafatirka waxaa ka mid ahaa in ustomize aad videos, sida beerista, falinjeeerka, qoqobada, iwm
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo gubi videos fiidiyo ugu DVD
Guudmar mashruuca DVD si loo hubiyo in wax walba xaq u tagaa ah. Ugu dambeyntii, waxaad tagi kartaa tab "Guba" oo kaliya riix "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya videos fiidiyo ugu DVD.
Markii ugu gubanaya waxay ku xiran tahay tirada aad videos. Ka dib markii la dhammeeyayna, waxaad ka dhigi kartaa cajalado fiidiyo ku DVD oo wuxuu ku raaxaysan aad videos on your TV qoyska iyo saaxiibada.
Gubasho fiidiyo video inay talooyin DVD:
Meel bidix ee disc ayaa lagu muujiyay on bar intii disc hoose; Waxaad dooran kartaa baaxadda DVD gubanaya u dhexeeya "DVD-R4.5G" iyo "DVD-R9.0G"; Sidoo kale, tayada wax soo saarka ilaa aad dooratay. Waxaad dooran kartaa mid ka mid kasta oo uga yimaada saddex doorasho, "taam u disc", "Standard video oo tayo leh" ama "video sare oo tayo leh".
Haddii aad fiidiyo waa fiidiyo MP4 sida Sony MHSPM1 Webbie iyo Sony Bloggie Touch jeebka fiidiyo ah, waxaa laga yaabaa inaad u qortid iyo kaydka badan oo videos MP4 on your computer. Haddii ay sidaas tahay, sidoo kale waxaa jira waxaad u tagi kartaa si aad u barato sida loo gubi MP4 in DVD . Si kastaba ha ahaatee, haddii aad fiidiyo diiwaanka AVI videos, sida G9 Canon iyo kamaradaha Nikon Coolpix, waxa kale oo aad ku baran kartaa sida loo gubi AVI in DVD .
Haddii aad qabto dhibaato in ay ku shuban fiidiyo videos aad, waxa kale oo aad u tilmaami kartaa in aad tutorial this: Sidee si ay u gudbiyaan videos ka fiidiyo si aad u computer .